/ Dina rättigheter och skyldigheter
Xuquuqdaada iyo waajibaadkaaga
Markaad raadinayso shaqo waxaad naga heli kartaa caawimaad iyo taageero iyadoo aan ku xirnayn waxa aad u baahantahay. Inta lagu jiro wakhtiga aad ku qorantahay Xafiiska Shaqada waa inaad si firfircoon u raadiso shaqo. Waxaa xitaa lagaaga baahanyahay inaad raacdo qorshaha aynu ku heshiinay.
Tani ayaanu kuu samayn karnaa
Tilmaan, talo iyo adeegyada bogayaga intarnatka ee kaa caawin kara jidka loo marayo shaqo ama waxbarasho
Taageero shakhsiyan ah oo aad ka hesho xiriiriyaha xafiiska shaqada dhanka telafoonka, sheekaysiga qoraalka ama ballan kulan. Tusaale ahaan waxaad heli kartaa caawimaada qorshahaaga, eegida aqoontaada iyo sida suuqa shaqadu u eegyahay.
Tilmaan ku saabsan sidaad u dooranayso xirfad una helayso shaqo.
Taageero dheeraad ah sida tusaale ahaan waxbarashooyinka xirfada, qiimeynta waxbarasho hore, baraaktiik, koorasyad isu diyaarinta xirfad iyo waxbarasho.
Fursada in la qaado talaabada lag gelayo ama dib loogu noqonayo nolosha shaqo, isla markaana shaqo-bixiyuhu laga kaalmeynayo mushahaaradaada.
Taageero xoogan oo kugu haboon kana hesho gacan-yare ka tirsan mid ka mid ah kuwa adeegyada na siiya.
Gunno lacag laga helo qasnadda shaqo la’aanta ama Qasnadda Caymiska, haddii aad buuxiso shuruudaha.
Sidan ayaad u baahantahay inaad samayso
Shaqo raadintaada anaga nala qorshee.
Dhiib warbixinta hawlaha oo sax ah bil kastaba.
Inaad awoodo soo bandhigida shaqooyinka aad raadisay.
Booqo ama nala soo xiriir markaynu ku heshiino sidaas.
Si firfircoon u raadi shaqo oo raadi shaqooyinka aanu kuu tilmaano.
Aqbal shaqada kugu haboon iiyo barnaamijka suuqa shaqada/taageero dheeraad ah.
Haddii aad ka qayb-qaadato barnaamij oo ku qaadato taageerada dhaq-dhaqaaqa, gunada sal dhigashada ama gunnada horumarka oo aanad ka qayb-qaadan karin hawlaha kuu qorshaysan waa inaad samaysaa wargelin markaad ka maqantahay.
U dhiib macluumaad sax ah qasnadda shaqo la’aanta ama Qasnadda Caymiska.
Maxaa dhacaya haddii aanad samayn sidii lagaa rabay?
Haddii aanad samayn sidii lagaaga baahnaa waxaad khatar ugu jirtaa in lagu siiyo digniin ama aad weydo gunnada lacagta ee laga helo qasnadda shaqo la’aanta ama Qasnadda Caymiska.
Haddii aanad raadsan shaqo, si kas ah u dheerayso shaqo la’aantaada ama aad sababto inaad shaqo la’aan tahay dhowr mar waxaad waayaysaa dhowr maalmood oo gunno lacag ah mar kastaba. Haddii ay sidani dhacdo dhowr goor waxaad khatar ugu jirtaa inaad weydo gebi ahaanba gunnadaada lacagta.
Digniin ama waa’yida qasnadda shaqo la’aanta
Digniin ama waa’yida gunnada lacagta ee laga helo Qasnadda Caymiska